mushaTURKEYDunhu reMarmara10 BalikesirBalikesir Kiziksa Bridge iri Zvakanaka
Balikesir Kiziksa Bridge iri Zvakanaka
07 / 01 / 2020 10 Balikesir, GENERAL, hyperlinks, HIGHWAY, Dunhu reMarmara, TURKEY
Kizilsa Bridge yakakwana
Balikesir Kiziksa Bridge OK: Balikesir Metropolitan Meya Yucel Yilmaz akachengeta vimbiso yake, Manyas County Manyas yakagadzirwa paKocasay, Gönen-Kızıksa Road Bridge Bridge Bridge yakapera.
Balıkesir Metropolitan Municipality inoramba ichishanda mumigwagwa yemazuva ano uye mabhiriji mudunhu rese isina kudzikira. Balıkesir Metropolitan Municipality, inosvika pakukosha kumapurojekiti ekufambisa mumadhorobha, inoona zvirongwa zvinozofambisa kutakurwa kwevagari vekumaruwa nekupa mabasa akafambarara uye emazuva ano ekufambisa. Migwagwa nemabhiriji basa rekuvaka mumatunhu ese, pamwe nekugadziriswa nekugadziriswa kwemigwagwa iripo pamwe nemabhiriji muchiyero chemudunhu reMetropolitan mu Manyas Kocasca County Manyas, Gönen-Kızıksa Road Bridge Bridge Bridge Bridge rakapera.
Muna 1977, bhomba rine makore makumi mana nematatu, rakavakwa nerutsigiro rwevanhu uye nerutsigiro rwevanhu venzvimbo iyi, rakaparadzwa neBalıkesir Metropolitan Municipality mushure mekupedza hupenyu hwayo hunobatsira uye kusakwanisa kupindura kudikanwa. Bhiriji iri mune imwe nzira inodimbudzira nguva yekufambisa pakati peÇanakkale neBalıkesir uye zvakare mumugwagwa unopa mukana wekupinda kuM Manyas neKızıksa Neighborhood; Iyo yakavakwa zvakare nehurefu hwemakumi maviri nemakumi mana emamita uye hupamhi hwemamita gumi nematanhatu. Kuitira kupa nekukurumidza uye kwakachengeteka kuyerera kwekufambisa kwemotokari uye vafambi, 43 metres yakafara nenzira yekumusoro yakaiswa pamativi ese ebhiriji rakawedzera. Railing yakaiswa pamativi ebhiri, iro rine chitarisiko chazvino kupfuura zvaraimboita. Iri bhiriji, iro rakaputswa uye rakavakiswazve, uye pombi yemamita zana nemakumi mashanu yakagadzirwa munzira yemamita mazana mashanu kusanganisira kupinda nekubuda.
Canakkale Balikesir mugwagwa
Iyo Kizilsa Bridge